जतिसुकै व्यस्त भएपनि केवल २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला, तपाइको जिबन अबश्य बदलिने छ ! – Namaste Host
February 13, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on जतिसुकै व्यस्त भएपनि केवल २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला, तपाइको जिबन अबश्य बदलिने छ !
जिन्दगी थोरै छ, हरेक पल म खुसी छु, काम मा खुसी छ, आराम गर्दा खुसी छु आज खाना मा मासु छैन, दाल मा पनि म खुसी छु आज गाडी छैन, हिडेर जान पनि म खुसी छु साथीहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुसी छु् आज कोही रिसाएको छ, उ रिसाएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुसी छु। जसलाई देख्न सक्दिन , उसको आवाज सुनेर पनि खुसी छु। जसलाई पाउन सक्दिन, उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु। हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ, उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुखुसी छु । भोलिको बारेमा थाहा छैन, पर्खाइमा पनि म खुसी छु । हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय, आजमा पनि म खुसी छु । जिन्दगी छ छोटो, हरेक पल म खुसी छु । यदि माथिका कुराहरुले तपाइको मन छोयो भने जवाफ दिनुहोस् । जवाफ बिना पनि म खुसी नै छु
नेपालमा भेटियो भग’वान विष्णुको दु’र्लभ अ’वतार, विश्वभर खैलाबैला! यस्तो छ यस्को निकै महत्व!